Beeraha lagu dubo | December 2019
Ugu Weyn Ee Beeraha lagu dubo
Honeysuckle: beeritaanka, sii kordhaya iyo daryeelka
Honeysuckle waa warshad matalaysa qoyska Honeysuckle. Waxaa badanaa laga helaa Bariga Aasiya iyo Himalayas. Inta badan dhirta waxaa laga arki karaa jardiinooyinkeena, maxaa yeelay waa mid aad u adag oo miro leh. Jardiinooyinka ku yaal dhulkeena, laba nooc oo dhir ah ayaa ah kuwa ugu badan: caanaha lagu dubo karo iyo honeysuckle buluug.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Beeraha lagu dubo 2019